Seynisyahan Soomaali ah oo uu ku dhacay Coronavirus -
HomeWararkaSeynisyahan Soomaali ah oo uu ku dhacay Coronavirus
“Anigoo shaqada jooga ayuu xanuunku i qabtay, kaddibna waxaa la iisoo diray guriga. Ma jirto meel xaqiiqo ah oo aan dhihi karo cudurka halkaas ayuu iga soo raacay, laakiin waxaan raacayay tareennada ay dadka badan saaran yihiin iyo basaska”, ayuu yiri.
“Xanuunkan wuxuu leeyahay qufac qallalan oo aysan waxba soo raaceynin. islamarkii aan guriga tagayba waxaa igu billowday qufacaas iyo qandho kulul, sidoo kalena waxaa i dhibayay naqaska”, ayuu yiri Xasan Cabdi Dhoorre.
Dhoorre oo su’aashaas ka jawaabaya ayaa yiri: “Horta wali ma jirto daawo soo baxday oo uu cudurkan leeyahay, sababtoo ah waa xanuun adduunka ku cusub. Aniga waxaan qaadanayay dawooyin kaalmaati ah, sida qandho jabiyaha loo yaqaanno barastimoolka, kaasoo aan labo xabo ka cunayay markiiba, sidoo kalena waxaan cabayay biyo badan”,
Wuxuu seynisyahankan sheegay in dawada coronavirus sameynteeda ay qaadan karto wax ka badan hal sano, xilli xanuunkan uu faro ba’an ku hayo inta badan dalalka caalamka.